Seychelles - zaridainan'i Edena - dia mandray mpifaninana 12 ho any Miss Reunion Crown
Home » Travel Associations News » Seychelles - zaridainan'i Edena - dia mandray mpifaninana 12 ho any Miss Reunion Crown
Ny mpandeha nidina ny sidina Air Austral ny zoma maraina teo tao amin'ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Seychelles nanana fahafinaretana nidina ambanin'ny Seychelles masoandro miaraka amin'ireo mpifaninana tsara tarehy 12 ho an'ny Miss Reunion ho satro-boninahitra amin'ny volana aogositra amin'ity taona ity.
Seychelles no safidy voalohany nataon'ny komity Miss Reunion tamin'ity taona ity hampiantrano ny sary ofisialy ny fifaninanana Miss Reunion ho fanomanana ireo kandidà amin'ny famaranana lehibe hataony amin'ny volana aogositra.
Ankoatry ny sary masina 12 avy any Reunion, dia hitan'ny solontena ny fisian'ny Miss Réunion 2018 izay nalahatra ihany koa ho Andriambavy fahatelo tamin'ny Miss France 2018, Ramatoa Morgane Soucramanien.
Ny delegasiona izay misy olona 25 ao anatin'izany ny ekipan'ny fahitalavitra Antenne Réunion- Mpampielezana ofisialy an'i Miss Reunion-, mpaka sary an'ny Miss Réunion, mpanakanto sy mpamorona make-up, tarihin'ny filohan'ny komity Miss Réunion Andriamatoa Aziz Patel sy ny talen'ny Miss Fifaninanana Réunion Ramatoa Amida Hussein.
Ny solontenan'ny STB tamin'ny fihaonany Ramatoa Bernadette Honore izay niara-niasa tamin'ny komity Miss Reunion mba hahomby ny tetikasa dia teo koa tamin'ny sidina.
Niresaka tao amin'ny seranam-piaramanidina izay nandraisany manokana ilay mpifaninana, Ramatoa Sherin Francis Seychelles Chief Executive Board (STB) dia nanambara fa faly izy fa voafidy ho amin'ny fanomanana ofisialy azy ireo ny toerana.
“Voninahitra iray ny fananana ny mpifaninana Miss Reunion eto Seychelles voalohany. Reunion dia tsena miroborobo ary ny fisian'izy ireo eto amin'ny Nosy dia hanampy amin'ny fanamafisana ny fahitana ny toerana haleha. Tsy azo lavina fa ny fampahalalam-baovao izay ho voarain'i Seychelles tamin'ny alàlan'ny fampielezana ny diany tany Seychelles dia hanana fiverenana tsara ho any amin'ny toerana alehany, "hoy i Mrs, Francis.
Ketsia Marie, Miss Creole Des Iles Seychelles 2018 dia teo amin'ny seranam-piaramanidina niaraka tamin'i Ramatoa Francis ihany koa handray ny vahiny Laonion.
Amin'ny lafiny iray, ny filohan'ny komity Miss Réunion Andriamatoa Aziz Patel dia nilaza fa ity dia ity dia ampahany lehibe amin'ny dian'ny mpifaninana amin'ny maha masoivohon'ny hatsaran-tarehy ho an'i Réunion.
Nilaza koa izy fa izany dia fotoana iray hahafahan'ireo kandidà hahafantatra bebe kokoa ny momba azy ireo miaraka miaina sy manomana ny tenany amin'ny famaranana lehibe.
Mandritra ny fijanonany any Seychelles, ny mpifaninana Miss Reunion dia halaina sary amin'ny toerana fizahan-tany isan-karazany manodidina an'i Mahé, Praslin ary La Digue, ao anatin'izany ny Botanical Garden, tanàna Victoria ary ny morontsiraka malaza indrindra.
Ny mpifaninana Miss Reunion dia handao an'i Seychelles amin'ny 7 Jolay 2019 ao amin'ny Air Austral, ilay kaompaniam-pirenen'i Miss Reunion.
Nanolotra teti-bolan'ny tovovavy ny minisitry ny fitantanam-bola any India: ny fihetsiky ny dia sy ny fizahan-tany
Fampisehoana an-dalambe Seychelles mahomby amin'ny tany afrikanina tatsimo mba hamandrihana ireo mpandeha mankany amin'ilay toerana haleha